Steel Cut Wire vakapfura - China Shanghai Bosun hasha
Steel Cut Wire bara
Copper pena / Copper Cut Wire pena
Zingi pena / zingi Cut Wire bara
Steel vendu waya pena inoitwa nedanho kudhirowa, kucheka vakaumbwa etc. nokuramba wakaomerera panzira maererano nezvinodiwa VDFI 8001/1994 uye USA SAE2431. The tudonhwe bara vari noruvara kukura pamwe nhengo neukukutu HV400-500, HV500-555, HV555-605, HV610-670, HV670-740 uye zvakawanda. Uye granularity iri kuparadzirwa kubva 0.2mm kusvika 3.0mm. Zvekare zvimiro zvemhashu vacho columnar uye idenderedzwa pamwe vakaumbwa G1, G2, G3. Kunze, wakawanirwa mukurumari yavo ranged kubva 3500cycles kusvika 9600 zvinogara.
Steel Cut waya pfuti dzinoridzwa yemanyorero kushandiswa nokuda nenyunje muchina pamwe Drum mhando, neketani mhando, vachisimudza chiredzo mhando, Crawler mhando, kupfuura mhando, kutenderera tafura mhando, kuwanda mhando, Pamakafamba mhando uye motokari mhando. Uyewo anogona kushandiswa akapfura kwebhosvo equipments, pretreatment ari kugadzirwa mutsetse, uye jecha nenyunje nzvimbo.
Mukana Steel akacheka waya pena
zvichienzaniswa simbi the, unogona kuwana 30% rutapudzo pamusoro mutengo. Maererano kwedu ruzivo, simbi akavezwa waya pena ungadzokera kumativi pena pashure-refu nguva use.bright chitarisiko, hapana huruva uye refu mukurumari ndiyo mukana wedu simbi chekawo waya wapfura. Shanghai Bosun hasha kambani iri tanga akaigadzira simbi chekawo waya wapfura.
Steel Cutwire bara
0,10 ~ 0.30%
Max kutsauka ± 1.0HRC kana ± 40HV
Min Density (Inogona pakutsvaga chidhakwa misha)
1. bara pretreatment: yokunamisa pretreatment, pamusoro gadziriro, pretreatment
2. Playing jecha: kutamba jecha.
3. Cleaning: akapfura rikavapo, ndokupfura nenyunje, vachikanda kuchenesa, Nokufema kuchenesa castings, forgings, ndokupfura nenyunje, ndokupfura nenyunje nokuchengetedza, vachikanda jecha, simbi kuchenesa, kuchenesa hwendarira, simbi okuchenesa.
4. bara: simbi rikavapo, simbi bara nenyunje, simbi bara nenyunje.
5. Vakasimbiswa: akapfura peening, kupisa kurapwa zvidimbu bara peening, akapfura peening giya.
6. bara: simbi pena, simbi sandblasting, chikepe nenyunje, simbi bara, simbi vapfurwa.
7. Ngura: bara rikavapo, hasha nenyunje, vachikanda ngura, ngura forgings, forgings descaling simbi ngura, simbi ngura.
Previous: Stainless Steel Cut Wire Hot
Next: Steel the-G10
hasha the Chilled Iron the
Carbon Steel Cut Wire bara
Chilled Iron the
Copper nenyunje the
Cut Wire pena
Cut Wire Steel bara
High Carbon Iron the
Copper gang 30-40